Artemisa - Yayo yakakura mabhenefiti ehutano | Bezzia
Sezvatinonyatsoziva, kune zvakawanda zvinomera zvinotibatsira zuva nezuva nekubatsira kwazvo. Eya, muchiitiko ichi taisazosarira shure apo takadudza Artemisi. Ehe, kana iwe usingamuzive nezita iri, pamwe zvinonzwika zvakanyanya kujaira kwauri kana tinokuudza kuti inonziwo wormwood kana kuti St. John's wort.
Pamwe iwe watoona kuti rudzii rwechirimwa chatiri kutaura nezvacho. Zvakanaka, ane zvakawanda hutano hunobatsira zvaunoda kuziva Pamusoro pezvo, ese anodzokera shure makore mazhinji, nekuda kwekubudirira ikoko kwatataura. Saka, isu hatisi kuzozvipa imwezve kufunga uye isu tichaona kuti izvo hunhu hukuru chii.
1 Mugwort inokubatsira kuderedza uremu
2 Inorerutsa kumwedzi
3 Unozosiya kurema kwedumbu
4 uchakanganwa marwadzo
5 Ndingatora sei chirimwa ichi
Mugwort inokubatsira kuderedza uremu
Zvechokwadi iwe unogara uchitsvaga nzira dzakanakisisa dzekubvisa mamwe kilos. Iwe unotoziva kuti haisi nyaya yekurega kudya asi kuunza chikafu chine hutano. Saka, semubatsiri kune izvo zvekudya zvikuru zvezuva, tichava nerubatsiro rukuru rweArtemisa chirimwa. Nekuti pakati pemabhenefiti ayo akanyanya kutaurwa, iyi ndeimwe yeakanyanya. Inokubatsira kuderedza uremu nekuti chirimwa chinonatsa. Chii chekuita icho chichava chakanakira kusvibisa muviri. Iwe unotoziva kuti nekudya kwe diuretic, iwe unodzivirira kuchengetwa kwemvura uye kazhinji, iwe uchanzwa zviri nani.
Vakadzi vane ma cramps akanyanya iwo mwedzi wega wega vachaziva zvatiri kutaura nezvazvo. Nekuti mukuwedzera kukurwadziwa zvakanyanya, izvo zvatisingatomboziva kupfeka, hatiwanzo kuwana mhinduro yakanaka yekudzikamisa. Saka, kana ukada kubheja pamishonga yechisikigo, Artemis anenge ari kudivi rako. Iwe unozosiya kuseri kwecolic yenguva yacho asi zvakare ndeyekuti ichaigadzirisa zvakare. Pasina kukanganwa kuti zvakare, nekuda kwazviri, iwe uchave nekuyerera kwakawanda. Saka, pane zvese izvi, iwe unofanirwa kuzviedza. Haufungi here?
Unozosiya kurema kwedumbu
Kune matambudziko mazhinji emudumbu atinogona kuva nawo mazuva ese. Imwe yeanowanzo kuve nekugaya. Iko kuremerwa kunoonekwa mushure mekudya ndiko kushungurudza zvakanyanya. Nenzira imwecheteyo, gasi kuvaka kana kunyange reflux Dzinoratidza kuti kugaya hakuna kutevedzera matanho anowanzoita. Saka, kuitira kuti tibatsire uye nenzira yakasikwa, ichavawo chirimwa ichi chatinofanira kufunga nezvacho. Nekuti inoderedza zvese izvi zviratidzo nekuda kwemabasa ayo ekuchenesa.
Kunyange zvazvo tisati tataura nezvemarwadzo ekutevera, ikozvino tinodzokera kumarwadzo asi tichireva majoini. Kukwizwa nemafuta mashoma eArtemis kuchakupa zororo raunoda. nokuti zvakare ine zvinhu zvinonyaradza. Saka, yave nguva yekuzvirega uchitakurwa nemhinduro yechisikigo senge iyi kuti ubvise marwadzo akanyanya ayo dzimwe nguva asingakubvumidze kuti uenderere mberi zuva nezuva.
Ndingatora sei chirimwa ichi
Mushure mekuona mabhenefiti makuru, iwe unozoshamisika kuti ungazvitora sei kuti utange kuona izvo zvakanaka. Zvakanaka, zviri nyore nekuti une nzira dzakawanda. Kune rimwe divi iwe unogona kuitora nenzira ye infusion kunyanya kana kuri kurapa marwadzo eku period atataura. Asi semuenzaniso, kubvisa marwadzo emajoini, unogona zvakare kuita masaja nemafuta eArtemis. Mukuwedzera kune infusion nemafuta, uchaiwana muupfu asi kana ukashandisa nenzira iyi, edza kusapfuudza magiramu matatu zuva rega rega. Nenzira imwecheteyo, haina kukodzera kuvakadzi vane pamuviri zvakare uye sezvatinogara tichitaura, hazvikuvadzi kuti uchaidya, bvunza chiremba wako kana uine zvimwe zvirwere kune vakwegura kana kutora imwe kurapwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Welfare » Mugwort: hutano hwakanaka hunobatsira